Indlela usimende ukhonkolo amabhlogo - elula, enhle futhi ongenasici! +
Wonke umuntu ofuna ukuba aguqule ekhaya lakho, sibhekene isidingo ukulungiswa ngaphakathi kanye nabangaphandle. Olunye uhlobo lokudla sekugcineni kuyinto stucco. Le nqubo - iyingxenye ebalulekile yikuphi ukukhanda. Kodwa nawu umbuzo, ukupulasitela ukhonkolo amabhlogo.
Ngaphambi kokuba uqale, kumelwe uhlole khona ebusweni imigodi kanye semfene. Esigabeni esilandelayo - primer odongeni ukwemboza. Uma lonke udonga embozwe primer, wasiqashisa zome kancane, Okwamanje, ukusakaza ingxube eyomile of usimende njengoba iqondiswe ku iphakethe, futhi ungaqala ukusebenza. Kodwa kulabo abasazi lokhu indlela, kungcono ucele usizo onguchwepheshe owazi ukupulasitela izindonga block Foam. Lapho asebenta nalelicembu impahla kufanele bacabangele ezinye izici, ukungazi
engeke ukukulethela elamukelekile. Lapho ukusebenza odongeni lwezitini , sicela uqaphele ukuthi ubamba kabili ngoba umswakamo kakhulu. Ngenxa yalokho, umswakama is ngokulinganayo basakaza phakathi ingxube usimende kanye odongeni lwezitini, uhlinzeka elihlangana okuthembekile. Nge zonke izindonga Foam block luyindida kakhulu. Indlela ayibhade zikasimende kulesi simo? Udonga ubamba wonke umswakama kanye usimende ingozi ukuze uhlale ezomile futhi sidilike. Ukuze igweme izinkinga ezinjalo, kufanele usebenzise primer. Kodwa ungenza ngaphandle kwalo, Ukukhemezela ne ngokwanele grout odongeni olukhonkiwe. Le ndlela kunokwethenjelwa futhi ukonga ngaphezulu kuqhathaniswa nabanye. Manje ngoba sewuyazi ukuthi ukupulasitela, ungakwazi dlulelani esinyathelweni esilandelayo. Ngaphandle elinde omiswe ephelele okusamanzi kuyadingeka ukubeka phezu ukhonkolo odongeni. Nale ndlela kwandisa adhesion usimende odongeni, kusukela umswakama iza ukuxhumana zikasimende kuyinto% 20 kuphela. Noma yimuphi umswakama esisele ngokulinganayo basakaza ebusweni odongeni, kanye esimweni odongeni lwezitini.
Manje okuncane mayelana primer. Indlela usimende ukhonkolo amabhlogo ngemuva kokusebenzisa primer, uma ukhetha phakathi ingxube liquid usimende primer namanje ukhetho lwesibili? Khona-ke kufanele wazi ukuthi kungcono ukugwema usimende acrylic. kusimo wayo ukuthi engalali ngokuphelele udonga umswakama, okubangela lonke aqoqana usimende. Futhi, ekuqhubekeni ungqimba usimende ayahwamuka, futhi odongeni iba umswakama ezomile ngokuhamba kwesikhathi. It engakutholi ibhalansi ezimanzi, okuyinto kubalulekile ukuze elihlangana ezinhle. Ngenxa yalokho, le imifantu usimende Liyashabalala.
Njengoba olukhonkiwe bome eside ngokwanele, kubalulekile ukuthi igumbi waba umoya omuhle, nasekukholweni okungazenzisiyo lokushisa efanelekayo. lokushisa okunjalo kusukela +3 ukuba + 30 ° C.
Kulokhu osekushiwo kumele kuphetfwe ukuthi kuphela isixazululo esingcono kakhulu futhi okungenani ezibizayo iwukuba pre-sishaye ketshezi ungene isixazululo odongeni olukhonkiwe.
Yilokho ngokuyisisekelo zonke izici isicelo olukhonkiwe ezindongeni emabhuloki Foam. Operating ngalolu lwazi, ungakwazi kalula uphendule yonke imibuzo ehlobene indlela lemva kahle izitini zikasimende. Lokhu kuzokwenza ebusweni odongeni smooth xaxa, amahle lengenamaphutsa. Yonke inqubo akuyona njengoba kunzima njengoba kwakubonakala Uma unganakile, kodwa namanje kudinga isikhathi nomzamo. abaluphahleka ubuchwepheshe oluphakeme ejwayelekile hhayi okuningi ukuhluka evamile, okuyinto isakhiwa wempahla kakhulu.
Cottage - a ... Ukwakhiwa Cottages
Formwork Esifanele isisekelo - isiqinisekiso amandla futhi ihlala isikhathi eside
Izakhiwo Modern yomphakathi
Isisekelo endlini Foam amabhlogo - ngesisekelo UKUQINA izindlu
Concept futhi izinhlobo wokwakha
Ukudla Izmaila Kitnera
Hotel Grand Yazici Mares Ihhotela 5 (Turkey / Marmaris)
Yebo akukho ukubhula: ngezindlela ezihlukahlukene
Five Isizathu esiyinhloko salokhu kokuya esikhathini ukubambezeleka
Isicisha-mlilo ubhaka: Imithetho kwesicelo kanye Ukukhetha
Izidakamizwa "Biotredin": ukubuyekezwa kanye Isicelo
Isiko yendabuko East lasendulo njengoba kuqhathaniswa West
Isifundo kubaculi bamakhanda. Indlela yokudweba umuntu wesicabucabu
Umkhumbi ukuvenisha (Yachting) ngoba evele lokhuni
Beet e-Korean. Recipe (hhayi elilodwa!)
Lemiklamo kwabesifazane - kuyini?